Manao Famangiana Tselika Ilay Iraniana Nianjeran’Ilay Vy Avobe Fibatàna Enta-Mavesatra Ny Mpanjaka Saodiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Septambra 2015 12:44 GMT
Namangy ilay Iraniana nianjeran'ilay milina vy fibatàna enta-mavesatra tany Lameka tany amin'ny hopitaly ny Mpanjaka Sodiana. Dikasary avy tamin'ny lahatsary tao amin'nyTwitter-n'i Zaid Benjamin.
Efa fantatra fa firenena mpifanandrina i Arabia Saodita sy Iràna. Maro ny fifanoherana misy amin'ireo firenena roa ireo, eo amin'ny governemantany sy amin'ny vahoakany. Na izany aza anefa, namangy ny iray tamin'ireo Iraniana trà-doza tamin'ny fianjeran'ilay fitaovana vy fibatàna enta-mavesatra tany Lameka tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo ny mpanjaka Saodiana Salman, olona 107 no maty tamin'izany ary 238 hafa naratra tamin'ny Zoma.
Araka ny filazan'ilay mpanao gazety Zaid Benjamin :
Mamangy ilay vehivavy iray naratra tamin'ny fianjeran'ilay fitaovana vy fibatàna enta-mavesatra mijolajoala tany #Mecca i Salam Mpanjakai #Saudiana .
Notaterin'ny Fars News Agency fa iraniana valo mpanao fivahiniana masina no maty tamin'ilay loza, isan'izany ilay mpahay siansa momba ny erana, Dr Ahmad Hatami, ary 38 hafa naratra.
Volana vitsivitsy lasa izay, nihenjana ny tady teo amin'i Arabia Saodita sy Iràna noho ny fampielezankevitry ny Saodiana manohitra ny mpikomy Houthi any Yemen. Ampangain'i Arabia Saodita ho mamatsy fitaovam-piadiana ireo mpikomy i Iràna, nefa lavin'i Iràna tanteraka izany. Ao anivon'izany fifanolanana izany, adolatsento iraniana roa handeha hody avy ao amin'ny Seranam-piaramanidin'i Jeddah no niharain'ny herisetra ara-nofon'ireo mpiasan'ny seranam-piaramanidina tamin'ny Aprily lasa teo.
Ho setrin'izany dia naàton'i Iràna vonjimaika ny fanaovana fivahiniana masina rehetra eo amin'i Iràna sy Arabia Saodita, raha toa ka nivory teo ivelan'ny Masoivoho Saodiana any Teheran ireo mpanao fihetsikatsehana nitaky ny hamonoana ny mpiasan'ny seranam-piaramanidina ho mariky ny fanoherana.
Iraniana mpanao fivahinianana masina manodidina ny 500.000 no manao Umra mankany Lameka isan-taona. Niverina ny fanaovana fivahiniana masina avy any Iràna ho any Lameka, fotoana fohy taorian'ilay sotasota ara-nofo tamin'ny Aprily.
Mifamahofaho ny fanehoankevitra ao amin'ny haino aman-jery sosialy momba ny famangian'ny Mpanjaka ilay vehivavy iraniana, manomboka amin'ny tsikera noho ny fahafohezan'ny fotoana namangiana izany ka hatramin'ny fiderana ny fihetsika maha-olona nasehon'ny Mpanjaka.
Maneho hevitra ny Iraniana Maria Afsharian :
@zaidbenjamin Karazana famangiana tselika izany.
Mitratrevatreva i Persian Steel :
@zaidbenjamin Azoko antoka fa nomeny baiko ny tandapany avy eo hanolana azy ireo tahaka ny nataon'ireo mpiasan'ny seranam-piaramanidina tany Jeddah tamin'ireo 2 lahy!
Ary lazain'i Bou_CA fa fanazarantenan'ny PR ilay fitsidihana :
@zaidbenjamin @green_lemonnn PR tsara fiomanana…
Nampiseho ny maha-” tena lehilahy” ny mpanjaka Saodiana ilay famangiana ho an'ny sasany, isan'izany i Nouf Al Abdullah, avy any Jordania :
@zaidbenjamin @Aljbreen tena lehilahy marina io Mpanjaka io❤️
Mizara fankasitrahana ihany koa i Shahir Al-Othman, avy any Jordania :
@zaidbenjamin Lehilahy marina sy sahy tokoa io mpanjaka io. Tia azy ireo Jordaniana mpirenireny.
20 ora izayKaraiba